Tsy mandeha ny scennery amin'ny Prepar3D v4. Nahazo hafatra diso aho rehefa nanokatra P3D aho
Ny mpampiasa ny New Prepar3D v4: Manaraka ny fiovan'ny sori-daza amin'ny Scenery.cfg amin'ny UTF-16LE ireo auto-installers dia tsy afaka mamela ny alahelonao avy hatrany.
Vahaolana vonjimaika: Sokafy ny lahatahiry C: \_ ProgramData \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D v4 ary sokafy ny rakitra Scenery.cfg amin'ny Notepad ary tsindrio ny File - Save As ... Ao amin'ny varavarankely izay misafidy ny UTF-8 ao amin'ny saha Encoding (jereo ny sary ambany) ary tsindrio Save.
Io famaha io dia averina averina isaky ny fametrahana ny sary tsirairay satria P3D mamerina mamerina ny rakitra Scenery.cfg amin'ny UTF-16LE aorian'ny fisokafana tsirairay.
ny Alakamisy Septambra 07 by rikoooo